Mudavadi oo ugu baaqay dadka ku dhaqan gobolka xebta in aysan u codeyn Jubilee – The Voice of Northeastern Kenya
Mudavadi oo ugu baaqay dadka ku dhaqan gobolka xebta in aysan u codeyn Jubilee
hogaamiyaha isbahaysiga Amani National Congress Musalia Mudavadi ayaa waxa uu ugu baaqay dadka ku dhaqan gobolka xebta in aysan u codeyn xukumadda talada heysa ee Jubilee waxana uu u sheegay in ay tageero u fidiyaan garabka mucaaradka dalka.
Masuulkan horay u soo qabtay xilka kuxigeenka raisul wasaaraha ayaa sheegay in la joogo xiligi ay mucaaradka dalka ay gacmaha isqabsan lahaayen si ay meesha uga saaran suurta galnimada ah in xukumadda hadda talada heysa dib loo soo doorto marka la gaaro doorashada lagu wado in ay dalka ka dhacdo sanada inagu soo aadan ee 2017-ka.
Mudavadi ayaa haddaladaas jeediyay xili u ku sugnaa countiga Lamu oo u khudbeynaayay dad isugu soo baxay jaziiradaha Lamu iyo Faza waxana u masuulkan sheegay in Jubilee ay tahay dawladd guul dareysatay oo aysan habooneyn in ay waddanka hogaamiyan.
Mudavadi ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha mucaaradka sida Kalonzo Musyoka, Raila Odinga iyo Moses Wetangula iyo xisbiyada daneeya siyaasada dalka in ay sameystaan hal isbahaysi oo ay ku midooban si ay uga guuleystan Jubilee tartanka loo gali doona hanashada kursiga madaxweynenimo marka la gaaro sanadka soo socda.
← Clinton oo ka digtay cawaaqib xumada ka dhalan karta waa haddi la doorto Trump
74 qof oo lagu dilay magaalada Xalab 8-dii maalmood ee ugu dambeeyay →